Izinyathelo Ezengeziwe Ngokumelana Nezingozi ZakwaMetrobus yi-IETT - RayHaber
IkhayaTURKEYIsifunda saseMarmara34 IstanbulIzinyathelo ezingeziwe zokumelana neengozi ze-IETT Metrobus
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, JIKELELE, Highway, Izinhlelo zeThire zeTrime, HEADLINE, Isifunda saseMarmara, Metrobus, TURKEY 0
Izinyathelo ezingeziwe zokulwa nezingozi ze-metrobus
Ngaphandle kokuncipha okukhulu kwe-2019 ezingozini zeMetrobus, i-IETT yenze ukuhlolwa okusha ezingozini ezimbili zakamuva. INhloko yeBhodi Lokuhlola yabelwa mathupha ukuphenya izingozi. Kwacelwa uchwepheshe kuChamber of Mechanical Engineers.
IMetrobus, ehamba izikhathi eziyinkulungwane zama-7 ngosuku ngamakhilomitha ayinkulungwane we-220 futhi ithwala abagibeli abayizigidi ezingama-1, yenza imisebenzi emibi ukuvimbela izingozi. Ngemuva kwezingozi ezenzeka kulayini weMetrobus ngo-Okthoba, abaphathi be-6 kanye ne-8 IETT bahlangana ukuze bahlaziye kabusha. Iphini Lomphathi Omkhulu we-IETT Hamdi Alper Kolukısa uhole umhlangano, kwaxoxwa ngezimbangela zengozi nezinyathelo zezinyathelo ze-metrobus. Kanye nezinhloko zeminyango, bonke abaphathi abafanele be-IETT babehambele lo mhlangano.
IPhini leMenenja-jikelele, u-Kolukısa, uthe kuqalwe uphenyo olunzulu mayelana nomthombo wezingozi nokuthi iNhloko yeBhodi Lezokuhlola ibekelwe yena uqobo ophenyweni lwezokuphatha. UKolukısa, iChamber of Mechanical Engineers nayo ifuna uchwepheshe, uyanezela.
Ngesikhathi somhlangano, abashayeli nabashayeli bezimoto ezazisetshenziswa ngaphambili bekuxoxwa nazo. Ngaphansi kwalolu hlaka, kwathathwa isinqumo sokuthi kubhekwe kabusha yini ukuqeqeshwa okuhlinzekwa abashayeli ngokushayela okunempilo futhi banake nezabelo zabo ezingozini.
UMasipala wase-Istanbul Metropolitan, ngemuva kwezingozi zemetrobus, izinyathelo zandisiwe, izingozi ezinjengalezi ngenhloso yokuvimbela "Uhlelo Lokwazisa Ngezikhathi Zokuqala" zaqala ukusetshenziswa.
Njengomphumela wezinyathelo ezithathiwe, ngokuya ngemininingwane ye-IETT, inani lezingozi kulayini nalo lehla. Inani lezingozi ngeminyaka limi ngalendlela elandelayo:
Izinyathelo ezintsha zokulwa nokufa kwabantu nezilwane ezifaka izitimela ezivela e-TCDD. 22 / 03 / 2012 Kuhloswe ukuvimbela ukulahlekelwa kwezimpilo ngezikhathi ezithile ngenxa yeqembu lokuvikelwa elahlelwe emigwaqweni ehlelwe yi-TCDD. I-TCDD 1. Ngokusho kolwazi olutholiwe eziphathamandla ze-Regional Road Directorate, uhlelo lwefenisha yocingo lusetshenziswa ngapha kwemigwaqo ngaphandle kwe-crossing level. Ngaphandle kokuvuselelwa kwabalaleli besitimela nabakhonkolo ngokuhambisana namazinga we-International Railway Association, i-TCDD inakekele ukuphepha komzila wesitimela. Ngale ndlela, kuhloswe ukuvimbela ukufa kwabantu nezilwane ngokungena emigwaqweni ngezikhathi ezithile. Ku-Edirne, okunikezwa kuqala ezindaweni zokuhlala zesithango kuqhubeka nokususwa. Amaqembu aqhubeka nokuzama ukukhulisa ukuphepha komzila wesitimela ezindaweni ezikhethiwe.
Izindlela zokuhamba kwezinga ziyanciphisa izingozi 10 / 01 / 2012 Ngenxa yezinyathelo ezithathwe ngonyaka wokugcina we-10, izingozi zokuwela ezingeni kanye nenani labafile nabalimala kulezi zingozi ziye zancipha kakhulu. Kule nqubo, amaphesenti angu-XNUM of inani lezigameko ezingeni lika-crossings, amaphesenti angu-78 alabo abalahlekelwa yimpilo yabo kanye namaphesenti angu-15 wabalimele bancishisiwe. Ngokombiko we-Hem Level Crossing Report kaz, izingozi ezingeni lika-crossing zinciphisa inani, kodwa ngenxa yalokho, ziphakathi kwezinkinga ezibaluleke kakhulu ze-TCDD. Ngokwezibalo, abantu abangu-50 bafa minyaka yonke ezingozini zokuwela ezingeni laseYurophu. Ngokusho kwe-International Union of Railways (UIC), i-600 ibhekene nabasebenzisi bomgwaqo
I-Metrobus yahlala emgwaqweni ... I-Metrobus yathatha ukuphila ... I-Metrobus njengaye, i-metrobus enjalo, iyini le metrobus 30 / 07 / 2012 Down Metrobus, Metrobus yasekelwa umgwaqo ... ... wathatha Metrobus Metrobus Metrobus can ... bathi, Metrobus Metrobus umsebenzi kanje ... Kuyini lokhu? USahi obanike leli gama ibhasi elide leli gama? Ngangifuna ukubhala indaba lelo gama namuhla ... sezwa njalo eminyakeni yamuva, nakuba ayengazi ukuthi inzuzo Metrobus iphutha, uma ufuna ukwazi indaba lelo gama liphuma ulimi, ngacabanga. *** Simelele block pop-up, ukuthi inamakhasi Facebook, Limoni echazwe izinhlobo izindaba kusichazamazwi, ukusungulwa Ngaphakathi fantasy, beyizidlova usuku cishe uneventful, Metrobus ... *** Istanbul Metropolitan Municipality lula zokuhamba, abantu ezishibhile futhi ukuqinisekisa ukuthi travel induduzo Igama lamamrobusi livelaphi kuwo?
Izinyathelo ezibhekiswe ekuthumeni kwe-Fuel 26 / 12 / 2012 UNgqongqoshe wezoMnyango noHulumeni u-Hayati Yazici, olungele ukuvimbela ukuthungelwa kwamafutha emthethweni omthetho, esikhundleni sepumphi ehilelekile ekushushumbiseni yonke indawo kuyobekwa uphawu, "Uhlaka lohlaka olwenziwe ngokubambisana nomthetho wokuthungela ugwayi luzophela. , isinyathelo esibalulekile siyothathwa ukuze sivikele imvelo nempilo yabantu, "esho. UNgqongqoshe wezeMvelo kanye noHulumeni uHayati Yazici, i-TOBB Izinsiza zezenhlalakahle eziphethwe yinkomfa yezindaba zatshele mayelana nezinyathelo ezithathwe ukuze zibhebhethekise. UNdunankulu I-Circular No. 2012 / 19 ibonisa ukuthi kwenziwe amalungiselelo abalulekile ekulweni nokuthungelwa kwamafutha ...
Uhlelo lwe-metrobus eNew Delhi lulethe abacebile nabampofu 11 / 07 / 2012 Ingabe ikhambi alethwe Turkey ezintweni zokuhamba noma ukuqaliswa ukuvaleka traffic kwemizila ngenxa yokugcwala kakhulu, kanye nalabo ukugibela Metrobus okuxoxwa unganelisekile kakhulu, futhi bahola umzabalazo ekilasini eNdiya. Iningi lentando yeningi yomhlaba wonke, inhloko-dolobha yaseNdiya, iNew Delhi, uhlelo lokuthutha olunjenge-metrobus olwenzelwe ukuthola isisombululo senkinga yethrafikhi, luhlanganisa ndawonye abantu abacebile nabangenayo ephakathi abasebenzisa izithuthi zangasese nabanikazi bemoto yangasese. Umzila we-"Bus Fast Transit" (OHT), oye waba nokuphikisana okukhulu kusukela ekuqediwe ku-2008, manje useyinkantolo ekusetshenzisweni kwabanikazi bemoto yangasese. Icala lokuqala likhethekile ...
Izinyathelo ezintsha zokulwa nokufa kwabantu nezilwane ezifaka izitimela ezivela e-TCDD.
Izindlela zokuhamba kwezinga ziyanciphisa izingozi
Izinyathelo ezibhekiswe ekuthumeni kwe-Fuel
Uhlelo lwe-metrobus eNew Delhi lulethe abacebile nabampofu
I-BTS, i-TCDD ayenzi umsebenzi odingekayo ngokumelene nezingozi
Led Traffic Signaling System ngokumelene Nezingozi eTarsus
I-IETT iqala enye indlela ye-3 ku-Metrobus
Ukuchazwa kweMetrobus kusuka ku-IETT
Incazelo ye-Metrobus hike from IETT